Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » ISydney iphelisa ukuvalwa kwayo kwe-COVID-19
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Izithintelo ezingakumbi ziya kukhululeka ngasekupheleni kuka-Okthobha, nje ukuba urhulumente afike kwi-80% yabemi abaneminyaka eli-16 nangaphezulu yokugonywa ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, i-uncacaccinated kuya kufuneka ilinde de kube ngu-Disemba 1 ukonwabela nayiphi na inkululeko.
ISydney, e-Australia inciphisa izithintelo emva kokubetha iipesenti ezingama-70 zethagethi yokugonya abantu abafanelekileyo.
INew South Wales ikhulule inani lezithintelo kubahlali abagonywe ngokupheleleyo.
Abantu abagonywe ngokupheleleyo banokuhlanganisana ngokwamaqela alishumi ngaphakathi, okanye amaqela angama-10 ngaphandle, ngelixa amaqela ayi-30 evunyelwe ukuya emitshatweni nasemingcwabeni.
Emva kokubetha i-70% yabemi abafanelekileyo abagonywe ngokupheleleyo, isixeko esikhulu sase-Australia, Sydney, Igqibile phantse iinyanga ezine zokuvala i-COVID-19 namhlanje.
Inkulumbuso entsha ye-NSW uDominic Perrottet
Imeko ye UMzantsi Wale omtshas kunye nekomkhulu layo ukuba Sydney, bakhulule inani lezithintelo kwabo bagonywe ngokupheleleyo, kubandakanya ukuvumela utyelelo kwamanye amakhaya kunye nokufikelela kwiindawo zokutyela, iivenkile zentengiso, iimuvi kunye neendawo zokuzilolonga ezivulekileyo zinee-cap ezixineneyo kwindawo.
Ndithi kuwo wonke umntu namhlanje, ENew South Wales, usebenzile, ”yatsho iNkulumbuso yaseburhulumenteni uDominic Perrottet.
Ngaphantsi kwezithintelo ezikhululekileyo, abantu abagonywe ngokupheleleyo banokuqokelelana ngokwamaqela alishumi emakhayeni okanye ngaphandle kwe-10, ngelixa amaqela e-30 angaya emitshatweni nasemingcwabeni. Abo baKhulu Sydney Indawo iya kuba nakho ukuhamba ngaphaya komda webhunga lendawo okanye iikhilomitha ezi-5 ukusuka kumakhaya abo okokuqala ukusukela ngo-Agasti.
“Uluntu luye lwenza umsebenzi oncomekayo ukufikelela kwiipesenti ezingama-70 ekujoliswe kuzo, kodwa kufuneka siqhubeke. Sifuna ukusondela kufutshane neepesenti ezili-100 zokugonya ngokuphindwe kabini ukugcina wonke umntu ekhuselekile, ”utshilo uMphathiswa wezeMpilo eNew South Wales uBrad Hazzard kwingxelo.
Ukuhamba kwenza ENew South Wales ilizwe lokuqala lase-Australia lokuphuma ngaphandle kokuyiphelisa eyosulela intsholongwane eluntwini, emva kokuqhambuka kweDelta ngoJuni litshabalalise ithemba lokuqhubeka nesicwangciso sokuphelisa ngempumelelo iAustralia ilandele uninzi lwalo bhubhane ukusukela ekuqaleni konyaka we-2020.